Ama-chiral compounds-APICMO CDMO Abakhiqizi
Imikhiqizo > Amakhemikhali e-Chiral
Ukulingana kuyinto impahla geometric of ezinye molecule kanye ions. I-molecule / ion yama-chiral ayinakuqhathaniswa nesithombe esibukweni sayo. Ukuba khona kwe-carbon isikhungo esingekho emkhakheni kungenye yezinto eziningana zokwakha ezidala ukwelashwa kwamakhemikhali anemvelo nama-inorganic.
I-enantiomers ngayinye ivame ukukhethwa ngokuthi ibe ngakwesokudla noma kwesokunxele. Ukulingana kubaluleke kakhulu lapho kuxoxwa nge-stereochemistry e-organic and inorganic chemistry. Lo mqondo ubaluleke kakhulu ngoba ama-biomolecules amaningi kanye nezidakamizwa ziyi-chiral.
Ama-molecule amaningi asebenzayo yi-chiral, kuhlanganise nama-amino acid (okwakhiwa kwamaprotheni) kanye noshukela. Ezimisweni zezinto eziphilayo, iningi lalezi zinhlanganisela ziyisifo esisodwa: ama-amino acids amaningi ayinhlawulo (l) noshukela kukhona okungafani nokudlula (d). Amaprotheni akhona ngokwemvelo akhiwa ngama-amino acids futhi ayaziwa ngokuthi amaprotheni ahamba ngamanxele; i-d-amino acids efana kakhulu iveza amaprotheni angakwesokudla.
Kuboniswa konke 4 Imiphumela